Xukuumada Somaliya oo meelmarisay samaynta lacag cusub oo Shillin Somali ah. – Radio Daljir
Xukuumada Somaliya oo meelmarisay samaynta lacag cusub oo Shillin Somali ah.
Janaayo 18, 2010 12:00 b 0
Muqdisho, Jan 18 – Kulan xasaasi ah oo ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho golaha xukuumadda ee dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya ayey kaga doodeen dhawr arrimood oo horyaallay golaha taasi oo ay ugu horreysay samaysashada lacag cusub oo muddooyinkaan dawladda ay ku talo jirtay.
Golaha wasiirrada Soomaaaliya oo uu shir guddoominayey R/wasaare Sharma?arke ayaa dood dheer ka yeeshay qorshaha dawladdu ay ku damacsan tahay in ay samaysato lacag cusub oo shalin Soomaali ah, waxaana markii danbe cod aqlabiyad ah goluhu ku ogalaadeen in dawladdu ay soo daabacato lacag shilin Soomaali ah.
Lacagta maanta ay meel-mariyeen daabacaadeed golaha wasiirrada dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya ayaa ah lacag shalin Soomaali ah qiyaas ahaanna aad u tiro badan taas oo badali doonta lacagta haatan dalka laga isticmaalo.
Afhayeenka golaha xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya Cabdi Qaadir Walaayo, oo saxaafadda u warramay markii kulanka golahu soo gabo-gaboobay ayaa sheegay lacagta goluhu ay maanta ogolaadeen in ay tahay lacag ka badalan midda haatan dalka laga isticmaalo, taas oo uu ku sheegay in ay noqon doonto mid aan la been abuuri karin.
Md. Walaayo, waxaa uu xusay lacagta haatan lagu talo jiro samaysinkeeda in ay in badan ka duwan tahay midda haatan shaqaysa, wuxuuna tilmaamay in ay noqon doono mid iskugu dhiggan 500, 10,000 iyo 20,000 sida uu saxaafadda u xaqiijiyey afhayeenka goluhu.
Dhanka kale goluhu fadhigoodii maanta waxay ku ogolaadeen guddoomiyaha kuxigeenka bank-ga dhexe ee dawladda KMG ah ee Soomaaaliy Maxamed Xaaji Cali, kaasi oo dhawaan la magacaabay..
Sikastaba ha?ahaatee qorshaha dawladdu ay ku samaysanayso lacagta cusub ayaa u muuqda mid mugdi badani ku jiro, maadaama dawladdu ay ka arrimiso oo kaliya meelo kooban oo ka mid ah magaalada Muqdisho, waxaana adkaan doonta meel dawladdu gaarsiin wayday maamulkeeda in ay gaarsiiso lacagteeda.
Xaalad kacsan oo ka taagan Xarardheere & burcad badeed isku qabsaday lacag madax furasho.
M/weyne Shariif oo sheegay in waxqabadka ugu weyn ee dawlada federaalka ah ee 2009 uu ahaa furitaanka idaacada Muqdisho.